UGAAR AH DUMARKA: 7 Been oo ragga Xaaslayaasha ah ay sheegaan si ay kuu qiyaanaan - Aayaha
Home XIRIIRKA IYO GUURKA UGAAR AH DUMARKA: 7 Been oo ragga Xaaslayaasha ah ay sheegaan si...
Waxaan idiin soo gudbineynaa 7 been oo raga xaaslayaasha ah ay u sheegaan haweenka si ay u qiyaanaan.
Si dhaqsi ah ayaan uga tagayaa
Waa been raga haweenka qabo ku qiyaanaanan haweenka aanan shakiga qabin. Marka uu nin kuu sheego beentaan, wuxuu kaa rabaa inuu maskaxda kaa galiyo inuu ka tagayo lamaantiisa balse xaqiiqda ayaa ah inuu been kuu sheegayo.
Caruurta ayaan kula joogaa
Wixii ku dhihi doonaan sidaan mar kale iyo mar kale si uu kaaga guuleysto, balse runta ayaa ah inuu farxad ku qabo xaaskiisa balse adiga ma ogaan kartid ilaa uu kuu sheego qof runta og.
Haddii uusan ku faraxsaneyn guurkiisa iyo xaaskiisa waa inuu ka tagaa balse ma ahan inuu adiga kuu sharaxo.
Been kale oo caan ah oo ay isticmaalaan raga haweenka qaba si ay ugu qiyaanaan haweenka, Waana been ay u badanyihiin in beenta noocaan ah ay haweenka u sheegan bal ka feker ninka xaaskiisa uu qabo kugu dhaho ma jecli sida uu adigana ku yeeli doono.
Ragga xaasaska ayaa isticmaala beentaan si ay kaaga dhaadhiciyaan inaad aqbasho qorshiisa isagoo kuu sheegaya inuu ka tegi doono xaaskiisa balse uusan marnaba ka tegi dooni.
Wadada kaliya ee aad taas uga hortagi karto ayaa ah inaad isaga dhan jarto.
Xaaskeyga uma qurxana sida adiga
Dabcan, Qofka marka uu qurxanyahay kaliya ayaa qurux lagu tilmaami karaa balse marka ay been tahay si gacanta laguugu dhigo waad garan kartaa.
Qof kasta isagaa isla qurxan, ha ogolaan in inta been laguu sheego wax walba lagaa sameysto.
Hal sariir kuma sii wada hurdi doono
Tani waa been ay inyabadan raga xaasleyaasha ah ay kuu sheegidoonaan si aad u aaminto in xaaskiisa aysan sariir kusii wada hurdi doonin. Xittaa wuxuu kuu sheegaa taariikh been ah oo ku leeyahay waqtigaas ayuu ahaa kii ugu dambeeyay ee aan sariir kula seexdo, yeysan kaa dhaadhicin taas.
Previous articleCaafimaadka Iyo Nafaqooyinka Laga Helo Cambaha
Next articleCommon lies we all tell during job interviews